18+ Loại Cây Trồng Trong Nhà Đuổi Muỗi "hiệu quả nhất" | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
18+ Loại Cây Trồng Trong Nhà Đuổi Muỗi “hiệu quả nhất” | Hatgiongtihon.net
Đang Đọc: 18+ Loại Cây Trồng Trong Nhà Đuổi Muỗi “hiệu quả nhất” | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Izityalo azinayo nje impembelelo yokususa ukungcola, ukuhlambulula umoya, ukuhombisa amakhaya kunye negadi, kodwa kunye nokusetyenziswa kwabantu abaninzi abangaziyo ukugxotha iingcongconi kunye nezinambuzane. Izityalo zangaphakathi ezigxotha iingcongconi zombini zendalo kwaye zikhuselekile, aziyichaphazeli impilo yethu.
Iingcongconi sisinambuzane esiyingozi kwimpilo yabantu kuba emzimbeni wabo ziqulethe iintsholongwane ezininzi kwaye zisasaza iintsholongwane ngqo emzimbeni womntu.
Ukulunywa kweengcongconi akubangeli nje ukurhawuzelelwa, ukulahlekelwa yi-aesthetics kunye nokungahambi kakuhle, kodwa kunokubeka umngcipheko wezifo ezinzulu ezifana ne-dengue fever, i-meningitis, i-Zika, i-malaria, i-dengue fever, njl.
Ngoko ke, ukusetyenziswa kwamanyathelo okuthintela nokubulala iingcongconi yinto enomdla kakhulu kubantu abaninzi.
Ukongeza kwiindlela eziqhelekileyo ezifana nokusetyenziswa kweziyobisi zamachiza, ukusetyenziswa kwe umthi into yokugxotha iingcongconi ekhaya yindlela entsha namhlanje kwaye izisa ukusebenza kakuhle okuphezulu.
Akukho mfuneko yokusebenzisa iikhemikhali kwaye ikhuselekile kakhulu. Ukusebenzisa le ndlela yokubulala iingcongconi kuya kuba yinto engenamsebenzi kwiintsapho ezinabantwana abancinci, abantu abanesikhumba esibucayi kwaye bacaphuke ngokulula kunye nezithako zemichiza.
Ukuza kwinqaku lanamhlanje, uFoo uya kukukhokela Izityalo zangaphakathi ezigxotha iingcongconi Kwakunye nendlela yokutyala, indlela yokunyamekela ezi zityalo ukuze ufumane iziphumo ezilungileyo.
1 Indlela izityalo ezizigxotha ngayo iingcongconi
1.1 1. Isityalo serosemary
1.2 2. Isityalo seBasil
1.3 3. Isilumko
1.4 4. IMinti
1.5 5. I-Lemongrass
1.6 6. Ilavenda
1.7 7. Umhlaba wePerila
1.8 8. Isityalo segalikhi
1.9 9. Umthi oneminyaka emihlanu ubudala
1.10 10. Umhlonyane
1.11 11. Iiclove
1.12 12. Ikati
1.13 13. Isityalo saseMarigold
1.14 14. Verbena
1.15 15. IiGeraniums
1.16 16. Petunia
1.17 17. Umthi we-Eucalyptus
1.18 18. Umthi weMelaleuca
Indlela izityalo ezizigxotha ngayo iingcongconi
Ngoko Zeziphi izityalo ezinokukhula endlwini ukugxotha iingcongconi?ngezantsi kwe-Fao idwelise izityalo ezininzi zokugxotha iingcongconi zangaphakathi kunye nendlela yokukhula kunye neempawu zezityalo, zikhethele izityalo ezifanelekileyo zokutshala.
1. Isityalo serosemary
IRosemary, ekwaziwa ngokuba yiRosemary, isasetyenziswa njengeyona njongo iphambili yokuba sisinongo ekwenzeni ukutya.
Nangona kunjalo, abantu abaninzi bayazi ukuba iyasebenza ekugxothweni kweengcongconi, kungekhona nje ukuba ioli efunekayo ekhutshwe kwisityalo ingasetyenziselwa ulusu ukuthintela ukulunywa yingcongconi.
Udinga nje ukubeka imbiza encinci ye-rosemary kwigumbi, idesksi ayincedi nje ukuphucula ubuhle bendawo yakho yokuhlala kodwa ikunceda ukukhupha iingcongconi endlwini.
2. Isityalo seBasil
Njenge rosemary, i-basil sesinye seziqholo ezidumileyo ezisetyenziswa kumashishini okupheka kunye namayeza.
Isityalo sokugxotha iingcongconi ngaphakathi Ungathethi ngesityalo se-basil, baya kukunceda ukuba ungakhathazeki malunga neengcongconi ezibuhlungu, zombini zinceda ukugxotha iingcongconi kwaye zincede umoya wakho wekhaya ube nomoya.
Zithengele isityalo se-basil kwaye uzibeke embizeni kufuphi nefestile okanye apho uhlala uphumla khona, ukhulule uxinzelelo emva kosuku olude lokusebenza.
Awuyi kuva kuphela ivumba elimnandi leyeza, kodwa uya kususa ezo ngcongconi zikruqulayo.
I-Sage, ekwabizwa ngokuba yi-sage, yayikholelwa ngabantu bakudala njenge-panacea eneziphumo zokuphilisa kunye ne-panacea.
Kwaye Izityalo zangaphakathi ezigxotha iingcongconi Kwakhona akunakwenzeka ukuba ungawukhankanyi umthi webhakethi, onokuthi usetyenziswe zombini ukuphilisa amanxeba, ukunceda ukugxotha iingcongconi, kunye nokunceda ukuvula umoya. Esi sisityalo esinqabileyo ngokwenene, nceda uthenge esinye sendawo yekhaya lakho.
Ngaphandle kwendlela eqhelekileyo yokuzikhulisa kwimbiza encinci kwaye uyibeke egumbini, eyona ndlela isebenzayo yokusebenzisa i-sage ukugxotha iingcongconi kuqala kukuzimisa elangeni kwaye uzitshise phezu kwamalahle. indlu yam.
Akuthethwanga nje ngezityalo zangaphakathi ezigxotha iingcongconi, esi sesinye sezityalo ekufuneka ubenazo endlwini yakho.
Azisebenzi nje njengesiqholo esikhulu kwizitya zakho, ziyimifuno yonyango ukukunceda ukuba ukhuphe ukudinwa, ulungelelanise inkqubo yakho yemithambo-luvo, ulungise amanzi e-detox ukunceda ukucoca amathumbu akho, nokucoca izihlunu zakho. wena.
Olu luhlobo olwahlukileyo lwe-lemongrass esihlala siyisebenzisa ezityeni, i-lemongrass isetyenziswa njengeyeza elikhulu lokunyanga izifo. I-Lemongrass yaziwa ngokuba sisityalo sokugxotha iingcongconi, i-oyile ebalulekileyo yesi sityalo ifumaneka ikakhulu ekubunjweni kwezitshizi okanye amakhandlela anevumba lokugxotha iingcongconi.
I-Lemongrass kulula kakhulu ukuyikhulisa, ukuba uyayikhulisa ixesha elide, inokukhula ibe yi-5 okanye i-6 yeemitha ubude. Ke, kuya kufuneka utyale into yokugxotha iingcongconi ngaphakathi egadini okanye kwimbiza enkulu.
Kubhekiselwa kule ntyatyambo, abantu baye baliva ivumba, kuba le ntyatyambo isetyenziswa kwi-perfumery, cosmetics, shower gel, .. ngoko ke iqhelekile kubafazi, akunjalo. Kwakhona oku Izityalo zangaphakathi ezigxotha iingcongconi Iyamangalisa, akunjalo?
Hayi nje ngevumba elithozamisayo nelimnandi, kukunceda ugxothe uxinzelelo kwaye ulale ngokulula, i-lavender ikwasebenza ukukhusela iingcongconi kunye nezinye izinambuzane.
Ngaphandle kunye namaqela angaphakathi ukuze uthintele iityuwa ezinentiyo kufuneka nje ukhulise i-lavender ngaphakathi okanye ngaphandle egadini.
Ukuba ikhaya lakho alinayo igadi enendawo encinci yomhlaba, ezi mbiza zintle zincinci zelavender ngokuqinisekileyo ziya kuba lukhetho oluhle.
7. Umhlaba wePerila
Oku kwakhona luhlobo houseplants baleqa Iingcongconi kulula ukukhula kwaye zisebenza kakuhle ekunyangeni izifo kunye nokugcina iingcongconi ngaphandle kwekhaya lakho, nangona ukusetyenziswa okuphambili kwe-perilla kufana nemifuno esecaleni.
Ngaphandle kokuzityala kwiimbiza ezincinci uze ufudukele kwiindawo apho iingcongconi zihlala zidibana khona, unokutyumza iqaqobana lamagqabi eperilla uze uwahlikihle esikhumbeni sakho esilunywa yingcongconi, oko kuya kuphelisa ukurhawuzelelwa kwangoko. .
8. Isityalo segalikhi
Ukutya ikonofile akunakuzigcina iingcongconi zikude, ngaphandle kokuba utya ikonofile rhoqo kwaye zininzi, kodwa ukuba ukhulisa izityalo zegalikhi, iya kukunceda kule nto. Ungagcina i-houseplants egxotha iingcongconi kwigadi encinci okanye kanye kwisitya esinje.
9. Umthi oneminyaka emihlanu ubudala
Le ntlanzi ithandwa ngabantu abaninzi kwaye ikhetha ukuyibeka endlwini kuba ukongeza ekudaleni indawo eluhlaza yokuhlala kunye nendawo yokusebenza, nabo banempembelelo yokuchasana nongcoliseko, ukuphelisa iigesi eziyingozi.
Ngaphandle koko, ekubunjweni kwesityalo kuqulethe i-formaldehyde, le nto inefuthe eliphambili lokunyanga ezinye izigaba ezingapheliyo, ukongeza, ziyakwazi ukugxotha iingcongconi kunye nezinambuzane ezijikeleze indawo ohlala kuyo.
Phakathi kwezityalo zasendlini ezigxotha iingcongconi, umhlonyane lukhetho olukhulu. Ungasisebenzisa ngokupheleleyo esi sityalo njengemifuno kunye nesityalo esisebenzayo sokugxotha iingcongconi. Usenokudibana nezityalo ezininzi zasendle ezikhula ecaleni kwendlela yakho okanye isitiya esincinci.
Ayingomhlonyane kuphela imifuno emnandi nenesondlo, okanye isetyenziselwa unyango njengeyeza lexesha elide, ikwanefuthe lokugxotha iingcongconi ngokwemvelo.
Ii-cloves zihlelwa njengenye yezona zityalo zisebenzayo zokugxotha iingcongconi endlwini ngenxa yevumba lesityalo. Nangona kunjalo, ngenxa yevumba labo, abantu abaninzi bafumana isiyezi okanye intloko xa besondelelene.
Ngoko ke, iingcebiso kuwe xa ukhulisa i-cloves kukubeka kwiindawo ezivulekileyo ukuze ivumba labo lisasazeke ngokulula emoyeni kwaye ligxothe iingcongconi.
Esi sityalo saziwa kakhulu njengenye yezityalo zokuhombisa ezikhuliswa kwiigadi. Igama layo linxulunyaniswa neekati ngenxa yevumba lazo kunye nokutya ezikuthandayo.
Ekubunjweni kwesityalo se-mint, iqulethe i-nepetalactone – le nto iboniswa zizazinzulu ukuba zinamandla ngamaxesha angama-10 kunezinye i-mosquito repelnts.
Ngoko ke, endaweni yokuchitha itoni yemali ukuthenga ingqayi enkulu kunye encinci ezaliswe ngamachiza anetyhefu ukubulala iingcongconi, tyala umthi egadini yakho ngoko nangoko.
13. Isityalo saseMarigold
Beka imbiza yeemarigolds kwindawo apho iingcongconi zidla ngokuhlanganisana khona, njengefestile okanye ucango okanye kwibalcony, apho zinokugcakamela ilanga zombini zize zigxothe ezo ngcongconi ziyingozi.
I-Marigold yaziwa njengenye yezityalo ezizithandayo zokuhombisa, le ntyatyambo inevumba elikhethekileyo elifunyanwa ziingcongconi zingakhululeki kakhulu, ngoko ke iingcongconi ziya kukhawuleza zihlale kude nendlu yakho.
Izityalo zangaphakathi zokugxotha iingcongconiI-Marigolds iqulethe ikhompawundi ebizwa ngokuba yiPyrethrum, edla ngokufumaneka kwimixube yokugxotha izinambuzane.
Le ngca idla ngokutyalwa kwiigadi, okanye kwiindawo ezikufutshane nomnyango ukuthintela iingcongconi xa zizimisele ukungena ekhayeni lakho.
Le ngca inepholile, ivumba elimnandi lemon entsha, ioli efunekayo ekhutshwe kwi-verbena iyasebenza kakhulu ekugxothweni kwezinambuzane ngokubanzi kunye nokulunywa yingcongconi ngokukodwa.
IGeranium sisityalo sokuhombisa esithandwa kakhulu kwaye sikhethwe ngenxa yeentyatyambo ezintle ezidibeneyo ezinemibala emininzi kunye nevumba elimnandi.
Ekubunjweni kwe-geraniums iqulethe inani lezinto ezifana ne-linalool, i-pinene, i-geranyl acetate, i-myrcene, i-menthone, i-limonene, i-citronellol, i-geraniol kunye ne-geranyl butyrate – ezi zinto zinefuthe lokunceda abantu baphumle ingqondo nomzimba. , kuphelisa ukudinwa, kodwa ziyityhefu kwiingcongconi.
Esi sityalo sifana ne-geranium, imilo ye-petunia imile okwefuneli ngombala opheleleyo kunye nevumba elimnandi elisisixhobo sokugcina iingcongconi kude.
17. Umthi we-Eucalyptus
Esi sityalo sidume ngeempawu zokugxotha izinambuzane. Imithi ye-eucalyptus idla ngokutyalwa kwindawo engumgxobhozo okanye emanzi ukuze kuphuculwe umhlaba kwaye incede ekunciphiseni iziganeko zemalariya.
Ivumba lamagqabi lisebenza kakhulu ekugxotheni iingcongconi. Ioli efunekayo ekhutshwe emagqabini kunye namasebe amancinci omthi we-eucalyptus nayo izisa ukuphilisa kunye nemiphumo ye-antibacterial kumzimba womntu.
Nangona kunjalo, xa esi sityalo sikhula kakhulu, ngoko xa kuziwa ekukhuleni, umthi mkhulu, ngoko unokutshala kuphela kwiindawo ezinkulu.
18. Umthi weMelaleuca
Izityalo zangaphakathi ezigxotha iingcongconi Eyokugqibela into yokuba fao likhankanywe kule post yanamhlanje ngumthi weti, abo bathwaxwa zizifo zolusu ezifana nerhashalala, banomdla wokhathalelo lwesikhumba, kufuneka uve kakhulu ngesi sityalo, kuba eyona nto isetyenziswayo kunyango lwezifo zolusu. .
Umthi womthi weti owaziwayo uyaziwa ngabantu abaninzi ngokukwazi ukunyanga izifo ezinxulumene nolusu kunye nokucoca umoya. Nangona kunjalo, ivumba elikhethekileyo lomthi weti livumba eligxotha iingcongconi kunye nezinye izinambuzane.
Ngoko siye safunda malunga Izityalo zangaphakathi ezigxotha iingcongconi kunye neempawu, indlela yokukhulisa umthi. Ngeli nqaku, ndiyathemba ukuba ungakhula izityalo zakho ezifanelekileyo kwikhaya lakho kunye nezinto ozikhethayo. Umnqweno omhle.
Cây chùm ngây – Cách trồng và chăm sóc cây chùm ngây | Hatgiongtihon.net
Cây chôm chôm – Cách trồng chăm sóc cây chôm chôm | Hatgiongtihon.net